ဇာတ်စင် cellulite 1, 2, 3,4- define ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းတရားများ,
Cellulite ၏စင်မြင့် - ဘယ်လို "လိမ္မော်သီးအခွံ" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အားလုံးအဆင့်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့?
များစွာမစုံလင်၏ cellulite အရှိဆုံးအကြောင်းကိုစကားပြောနှင့်အရေးပေါ်ပြဿနာများတစ်ခုဖြစ်သည်ကိန်းဂဏန်းများ။ ဒီ "လှပသောခန္ဓာကိုယ်ရန်သူ" နဲ့အရှိဆုံးအမျိုးသမီးအကျွမ်းတဝင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သူနှင့်အတူအချို့သောကံတှေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တည်ရှိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကုသမှုသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညွှန်ပြနေသည် cellulite ၏ထားတဲ့စင်မြင့်ကိုငါသိ၏။
"လိမ္မော်သီးအခွံ" ကိုသာဆူဖြိုးမင်းသမီးမှာဖျောပွထားပါကြောင်းအဆိုပါအထငျမှား။ ဒီကမကြာသေးမီကသည်အထိထင်ခဲ့သည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူစုဆောင်းပိုလျှံအဆီသိုက်၏ရုံပေါ်ထွန်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး, မိန်းမကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏ချိုးဖောက်မှုများ၏သက်သေသာဓက။ ဒီအထောက်အထားပင်သွယ်လျမိန်းကလေးငယ်များ, ပိုလျှံအလေးချိန်ခံစားခဲ့ရဖူးဘူးအခြို့သောဇာတ်စင် cellulite လက္ခဏာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတိုငျအောငျ, အရောဂါ၏သွေဖည်ခြင်းရှိမရှိဒါမှမဟုတ် cosmetology ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ရည်ညွှန်းဖို့စဉ်းစားရန်ရှိမရှိကျော်ကျွမ်းကျင်သူများအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုလည်းမရှိ။ အဆိုပါအရေပြားအောက်ဆုံးအလွှာအတွက် cellulite ဖက်တီးတစ်သျှူးချပ် connective တစ်ရှူးအမျှင်ကွဲကွာရှိရာ adipose တစ်ရှူးအတွက်ပိတ်ဆို့မှုကိုအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖွဲ့စည်းပုံဟာဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာအပြောင်းအလဲများပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ရှူးများ၏ထောက်ပံ့ရေး၏အခက်အခဲမှဦးဆောင်သွေးနှင့်တုံးမှာတက်စေ့စောင်ရေရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့နှောင့်အယှက်များကလိုက်ပါသွားသည်။
အဆိုပါရလဒ်တစ်ခုအဆီမညီမညာဖြစ်နေသောအစစ်ခံနှင့် lumpy အမြင်အာရုံအသားအရေမျက်နှာပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစေသည်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာစိမ်းထုတ်ကုန်များ၏ပုံစံပိုလျှံအရည်လဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ cellulite ၏မူပြောင်းခြင်း၏ဒေသများတွင် "မျက်နှာသာ" - ပေါင်နှင့်တင်ပါး, ဒါပေမယ့်မကြာခဏချွတ်ယွင်းဝမ်းဗိုက်, လက်နက်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ cellulite ၏ဒီဂရီအပေါ် မူတည်. "လိမ္မော်သီးအခွံ" ကိုအပြင်အခြားအပြစ်အနာအဆာရောဂါလက္ခဏာတွေမှထောက်ပြ: ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့, နာကျင်မှုနှင့်အခြားသူများအတွက်အရေပြား sensitivity ကို၏တစ်ရှူး, cyanosis, ပျက်စီးယိုယွင်း၏ရောင်ရမ်းခြင်း။
Cellulitis - အကြောင်းရင်းများ
: အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ရောဂါသောအခါ၏ cellulitis အကြောင်းတရားများကိုမကြာခဏအများအပြားထွက်လာပါတယ်အချက်များ, အရာတို့တွင်အများပါဝင်
(စသည်တို့ကိုအပျိုဖော်ဝင်, ကျရှုံးခြင်းသိုင်းရွိုက် function ကို, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ပါးစပ် contraceptives နှင့်အတူဆက်နွယ်) ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ;
စိတ်ဖိစီးမှု, ဦးနှောက်အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Overload,
အဆိုပါရောဂါဗေဒအဆင့်ဆင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ cellulite အတွက်အပြောင်းအလဲတဖြည်းဖြည်းတိုးသောကြောင့်, ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကုသမှုအကြံပြုချက်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအသီးအသီးသောအအများအပြားချွတ်ယွင်းအဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်။ သင်အနည်းငယ်စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်သည့်အဘို့အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှ cellulite ဇာတ်စင်၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်: တဦးတည်းလက်၏လက်မနှင့်လက်ညှိုးပေါ်မှာလာပြီးရှိပါတယ်ရှိမရှိ, ထိုကြွက်သားမျှင်အနှံ့အရေပြား 5-10 စင်တီမီတာဧရိယာ၏အရွယ်အစားချုံ့ခြင်းနှင့်အရေပြားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုစောငျ့ရှောကျ။
cellulite - အဆင့် 1
cellulite ၏ကနဦး, ပထမအဆင့်မှာတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအရေပြား၏ဧရိယာချုံ့တဲ့အခါမှာ သိ. "လိမ္မော်သီးအခွံ" ရေးဆွဲထားပြီးကပုံမှန်ပြည်နယ်အတွက်အနည်းငယ်မျှသာသိသာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါ။ အရေပြားတစ်သျှူးချောမွေ့ပေမယ့်သွေးနှင့်တုံးမှာတက်စေ့၏ရပ်တန်နှင့်ဆက်စပ်အနည်းငယ်ရောင်ရမ်းခြင်းလည်းမရှိ။ ထို့အပွငျ cellulite, ပထမအဆင့်ကတော့သွေး, အရေပြားကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သမာဓိကြာကြာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမှုကြောင့်အရာမှစွမ်းရည်အသစ်ပြန်ထွက်တစ်ရှူးများ၏အားနည်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
cellulite - အဆင့် 2
ကြွက်သားတင်းမာမှုကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်နေစဉ်အသားအရေမြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏မညီမညာဖြစ်နေသော, ကွမျးတမျး၎င်း၏ compressed လုပ်မထားတဲ့ခြံ၌ပြသချိန်တွင် cellulite ၏ဒုတိယအဆင့်တွင်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားလျော့ရဲရဲကြည့်, တစ်ဦး palpation ဖျံမှာယင်း၏ elasticity ကျန်းမာအရောင်, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယခုပင်လျှင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ cellulite ထိခိုက်ဒေသများ၏ဤအဆင့်မှာ sensitivity ကိုဆုံးရှုံးဖို့စတင်။
အဆင့်3cellulite
ဤအဆင့် elasticity လျှော့ချတစ်သိသာ, ကွဲပြား tuberosity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ "spongy" cellulite နှင့်အသားအရေ coarsening ဟုခေါ်သည်။ cellulite ၏တတိယအဆင့်တွင် - adipose တစ်ရှူးပြင်းထန်စွာပျက်စီးနေသည်ခြေလှမ်းရသောရောဂါဗေဒတိုးတက်မှု, သွေးလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်တုံးမှာတက်စေ့ကိုချိုးဖောက်, pinched အာရုံကြော။ တစ်ရှူး, haematomas ၏အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပြင်းထန်ရောင်ရမ်းခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, အရေပြားခြောက်သွေ့အအေးခံစားရပါတယ်။ အရေပြားအောက်စကားတွေအခါ sclerosed connective တစ်ရှူးများ၏သိပ်သည်း node များခံစားခဲ့ရသည်။
အဆင့်4cellulite
ဖြန့်ချိ cellulite, အရေပြားနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်းအကြီးစားပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာလေးနက်ဆုတ်ယုတ်မှု, အရာ၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်။ ဖြူဖပ်ဖြူရောသို့မဟုတ် cyanotic အရေပြား, ချို, ချို, ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေမြှုပ်, ဆင်တူသောကြောင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ကြီးမားသောသွေးပြန်ကြောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကြွက်သားကျုံ့ခံယူ, လုံးဝကျိုးတတ်၏။ အရေပြားပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါနာကျင်အာရုံရှိပါတယ်။ အသားအရေမျက်နှာပြင်အတွက်အပြောင်းအလဲများရှင်းလင်းစွာပင်တင်းကျပ်စွာအဝတ်တစ်အလွှာမှတဆင့်ကွာခြား။
cellulite - ဇာတ်စင်ကုသမှု
မည်သို့ပင် cellulite အဘယ်အဆင့်မှာ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့သို့မဟုတ်လျှော့ချရေးအချက်များလှုံ့ဆျော၏အကျိုးသက်ရောက်မှု minimize ရန်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့သည်။ ဒါဟာအလုပ်စစ်အစိုးရကိုစောင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ဖို့, ကျန်းမာစား၏အခြေခံမူလိုက်နာတစ်ခုတက်ကြွလူနေမှုပုံစံစတဲ့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်အရှုံးမပေးရန်အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့် (တစ်နေ့လျှင် 1.5 လီတာထက်လျော့နည်းမဟုတ်) အရည်တစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ရပ်နေဝတ်ထားအတွင်းခံအဝတ်အစားအာဟာရနှင့်အစိုဓာတ်အေးဂျင့်မှတဆင့်ဆွဲခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာ, ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ငြင်းဆန်။
အဆိုပါအရေပြားအပေါ်ယံ၏တိုးတက်မှု, အရေပြားတစ်သျှူးများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် elasticity တိုးတက်လာခဲ့သည်။
cellulite အဆင့် 1 - ကုသမှု
ကနဦးအဆင့်တွင်အချိန်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ် cellulite, ကကောင်းစွာတညျ့နိုငျသညျ, ဤအဆင့်တွင်ပြုလုပ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီမှမသုံးပဲပြဿနာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအမှု၌အဓိကရည်မှန်းချက် - ပိုလျှံအရည်များနှင့်တစ်ရှူးအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များရဲ့ပုံမှန်၏ပုံမှန်မစင်သေချာဖို့ဖဲစနစ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမြဲမြံစေရန်။ ဒါဟာအခါအားလျော်စွာသည့်ချွေးပေါင်းအိမ်လာရောက်လည်ပတ်, Anti-cellulite အေးဂျင့်များအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ Self-အနှိပ် (ကို manual, cupping သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲ) ပြုလာဘို့ကျွမ်းဘားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုသည်။
cellulite ၏ "မျိုးဆက်" ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပြီးသားတက်ကြွစွာ cellulite ၏ပထမအဆင့်တွင်ပျောက်သွားမှာဘယ်လောက်အံ့သြပါကဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့စတင်ပါပြီ။ သူမြားစှာမိန်းကလေးငယ်များ တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်သောကွောငျ့ဤမေးခွန်းကိုမှလူပျိုဖြေပေးထားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကတစ်သျှူးပြုပြင်သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ကာလလိုအပျနိုငျကအခြားကိစ္စများတွင်, လ၏စုံတွဲတစ်တွဲရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
cellulite အဆင့်2- ကုသမှု
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေဆဲလည်းမရှိပေမယ့် အကယ်. ဖွံ့ဖြိုးတန်း2cellulite ကုသမှုချဉ်းကပ်မှုပိုမိုလေးနက်နှင့်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သင့်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ဆက်ဆံသင့်ကြောင်း, တိုးမြှင့်သင့်ကြောင်း, နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ: တက်နှင့်ခြေလျင်ပေါ်လှေကားကဆင်း, အထိုင်များအလုပ်နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျော့နည်းအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏအလင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တူသောအဘို့အားလပ်ချိန်ယူသည်။ ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရေကူး, စက်ဘီး, running ပေးသည်။
အနှိပ် (ကို manual, ဟာ့ဒ်ဝဲ, လေဟာနယ်);
ကိစ္စ္စ (ရေညှိ, ပျားရည်, သရွတ်);
ကွာ (စက်မှု, ဓာတု);
ကုထုံးဗတ် (ဆား, turpentine, ရွှံ့);
အလှကုန် Anti-cellulite (ပွတ်တိုက်, လိမ်းဆေး, gels) ၏အသုံးပြုခြင်း။
cellulite3ဇာတ်စင် - ကုသမှု
အားလုံးအရိပ်လက္ခဏာကြောင့်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို,3ဒီဂရီ cellulite ထောက်ပြပါကအထူးကုတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ မူလစာမျက်နှာကုသမှုဤကိစ္စတွင်အတွက်ထိရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ပြဿနာဒေသများရှိပိုလျှံအဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွဲစိတ်မှု - သင်ဟော်မုန်း, ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, အူနဲ့အသည်းသန့်ရှင်းရေး, liposuction ၏ဆေးဆုံးမခြင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အစားအသောက်, လေ့ကျင့်ခန်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းစနစ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ခံရဖို့လိုအပ်အိမ်မှာကုစားအပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း။
cellulite ၏အဆင့်4ကုသမှု
နောက်ဆုံးအမှာ cellulite ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများဆုံးပြင်းထန်ဇာတ်စင်စေ့စေ့စပ်စပ်နှင့်ရေရှည်လိုအပ်တယ်, ဤအမှု၌ဆရာဝန်များ၏အကူအညီမပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါဟာကျန်းကျန်းမာမာကျောအရေပြားကိုအောင်မြင်မည်မဟုတ်သည်ကိုနားလည်ကြပေမယ့်အခြေအနေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်များထူထောင်အပြင်, liposuction, ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာတစ်ခုအလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆေးခန်းအတွက် Anti-cellulite ကုသမှုပုံမှန်သင်တန်းများလိုအပ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းအဆင့်မှာ cellulite ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သည်အခြားရောဂါဗေဒနှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, cellulite ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ထက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ cellulite ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်များ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့အချိန်ကိုလျင်မြန်စွာလုပ်ကြံခံရနိုင်လျှင်, ဒီအဆင့်မှာကရောဂါဗေဒဖြစ်စဉ်များကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်လို့ပဲ။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ထုတ်ကုန် (ဒါပေါ်မှာအသား, Pickled, သကြားလုံး, လတ်ဆတ်သော pastries နှင့်) ၏အစားအသောက်များတွင်ကနေဖယ်ထုတ်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက, ပင်ပန်းနွမ်းနယ် Minimize ။
ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ elasticity များ၏အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းဘို့နည်းလမ်း Apply ။
ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကဲ့သို့ - ခြေချောင်းအပေါ်ပြောင်းဖူး?
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးတောင့် - ထိုတစ်လောကလုံးသည် SPA-စောင့်ရှောက်မှု
နောက်ကျောအပေါ်ဝက်ခြံ - အကြောင်းရင်းများ
Power ကရေချိုးခန်း - လက္ခဏာများနှင့် contraindications
ဒီဇင်ဘာလအသီးအသီးနေ့အဘို့ 31 အရေးကြီးသောအရာ
Vinaigrette - စာရွက်
ဆောင်းရာသီတွင်စတော်ဘယ်ရီ - ချက်ပြုတ်နည်းများ